China Monopole Tower vs Lattice Type တာဝါ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စက်ရုံ နှိုင်းယှဉ်မှု | XY မျှော်စင်
မိုနိုပိုလီတာဝါ vs ရာဇမတ်ကွက်
ဤစာတမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည့် ရှုထောင့်များသည် Aesthetical၊ Economical နှင့် Statical တို့ဖြစ်သည့် ဤစာတမ်းပါ တင်ပြထားသည့် ကိစ္စအပေါ် အခြေခံ၍ မည်သည့်မျှော်စင်အမျိုးအစားတွင် အားသာချက်ရှိသည်ကို ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရန် ယေဘုယျလမ်းညွှန်ချက်အချို့ဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်စရာသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုစီအပေါ်အခြေခံ၍ လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည့် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် ပိုမိုလွယ်ကူမည်ဖြစ်သည်။
1. မျှော်စင်အမျိုးအစားအားလုံး၏ အသေးဆုံးခြေရာ။
2.9m မှ 45 m အထိ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
3. ယေဘူယျအားဖြင့် အနုသဏ္ဍာန်အရှိဆုံးဟု ယူဆကြသည်၊
4. အချို့သောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များတွင် 18 မီတာအောက် တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် ဇုန်သတ်မှတ်ခွင့် မလိုအပ်ပါ။
6. တပ်ဆင်ရန်အတွက် ကရိန်း လိုအပ်သည်။
7. ပို့ဆောင်မှုအတွက် ကြမ်းပြင်အပြည့်လိုအပ်သောကြောင့် သယ်ယူစရိတ်ပိုကြီးပါသည်။
8. စျေးအနည်းဆုံး၊ ဒါပေမယ့် စျေးကြီးတယ်။ ရာဇမတ်ကွက်များ.
9. Antennas များကို ဒေါင်လိုက်3မီတာမှ 4.5 မီတာ တိုးမြင့်ကာ ဒေါင်လိုက်ခွဲထားခြင်းဖြင့် မိုနိုပိုလီပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည်။
10. အရည်အသွေးမြင့် ချိတ်ဆက်မှု- အချက်ပြလက်ခံမှု၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် အရည်အသွေးမြင့်မားမှုသည် အထူးသဖြင့် ခက်ခဲသော အေးခဲခြင်းနှင့် လေတိုက်သည့်အခြေအနေများတွင် ပြင်ပလွှမ်းမိုးမှုများကို တောင့်တင်းမှုနှင့် ခံနိုင်ရည်အား ပေးစွမ်းသည်။
11. ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်- အခြေခံ ပံ့ပိုးမှု အရွယ်အစားသည် မြို့တော်တည်ဆောက်မှုတွင် အထူးအရေးကြီးသည့် အဆောက်အဦ၏ သေးငယ်သော ဧရိယာကို ပံ့ပိုးနိုင်စေပါသည်။
12. Aesthetics- အပြင်ပိုင်းတည်ဆောက်မှုတွင် ရိုးရာဒီဇိုင်းများနှင့် သာသာသာသာကွဲပြားသည်၊ ၎င်းသည် မြို့တော်ရှိ တာဝါတိုင်များ နေရာချထားမှု၊ လုပ်ငန်းပိုင်နက်များ၊ အကာအကွယ်ပေးထားသည့် ဧရိယာများ စသည်တို့တွင် အရေးကြီးသော အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။
13. လည်ပတ်မှု- စက်ကိရိယာများ၊ ကေဘယ်ကြိုးများ၊ feeders များ၊ လှေကားများကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် စက်ပစ္စည်းများထံ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင်ရောက်မှုကို ဖယ်ရှားပေးကာ ရာသီဥတုကို အကာအကွယ်ပေးသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုးမြင့်စေသည်၊ ၎င်းသည် ခက်ခဲသောရာသီဥတုအခြေအနေတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်စေကာ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို သိသိသာသာလျှော့ချခြင်း
14. ဒီဇိုင်းတွင် လိုက်လျောညီထွေရှိမှု။
ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ထောက်ထားသည့် ရာဇမတ်မျှော်စင်
1.6မီတာမှ 60 မီတာအထိ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
2. တပ်ဆင်မှုခြေရာသည် တစ်ခုထက် သေးငယ်သည်။ guyed ရဲတိုက်ဒါပေမယ့် ထက်ကြီးတယ်။
မိမိကိုယ်ကို ပံ့ပိုးပေးသော ယောက်ျားလေးများနှင့် လက်ဝါးကြီးအုပ် တာဝါတိုင်များ။
3. မကြာခဏ သင်္ဘောများ ပြိုကျပြီး ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခ လျှော့ချသော်လည်း ဆိုက်တွင် တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်သည်။
5. ပေါ့ပါးသောကိုယ်ကိုတိုင်ပံ့ပိုးပေးသည့်မျှော်စင်သည် 30 မီတာအောက်ရှိ လိုအပ်ချက်များအတွက် သင့်လျော်ပြီး အချို့ရွေးချယ်မှုများသည် ရိုးရှင်းသောကွန်ကရစ်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြင့် အနည်းငယ်မျှသာတပ်ဆင်မှုခြေရာကိုအသုံးပြုသည်။
6. အင်တာနာများနှင့် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ပန်းကန်များကို လေးလံစွာ တင်ဆောင်နိုင်သည်။
7. Monopole ထက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။
8. latticed မျှော်စင်အဖွဲ့ဝင်များ၏စွမ်းရည်နှင့်ချိတ်ဆက်မှုများရှိနိုင်ပါသည်။
9. မော်ဒယ်နှင့် ဒီဇိုင်းသည် အတော်လေး လွယ်ကူသည်။
10. Monopole များသည် အရင်းအနှီးကြီးမြင့်သော ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားသော အထူးပြုပြားပြားကွေးစက် လိုအပ်သည့် ပြားများ၏ ကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားခြင်းကြောင့် Monopole များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ကုလားပဲများထက် ကုန်ကျစရိတ်ပိုများသည်၊ ပုံ 2။
11. ဂေဟစနစ်- ရာဇမတ်ကွက်ဖွဲ့စည်းပုံသည် အလွန်ပွင့်လင်းသောကြောင့် ရှုခင်းအပေါ် သက်ရောက်မှုနည်းပါးသည်။ သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အသေးစားကွန်ကရစ်အုတ်မြစ်များကြောင့် အကောင်းဆုံးဂေဟစနစ်ဟန်ချက်ညီမှု (ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို ချွေတာနိုင်သည်၊ မျှော်စင်နှင့် ဖောင်ဒေးရှင်းနှစ်ခုလုံးကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်)
ယခင်- 110kV Double Circuit Steel Lattice Strain Tower
နောက်တစ်ခု: 110kV Single Circuit Angle Steel Lattice Tower